momba ny vehivavy, natao tamin’ny1995 tany Beijing, ity taona 2020 ity. Hatreto aloha dia tsikaritra fa vehivavy sy ankizivavy maro maneran-tany no tsy misitraka ny zony, indrindra eo amin’ny lafiny fahasalamana ara-pananahana. Ao anatin’izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy izao ary dia nisafidy ny hanome lanja bebe kokoa ny fahasalamana ara-pananahana sy ny fomba fandrindram-piterahana i Madagasikara, ao anatin’ny lohahevitra hoe : " Izaho sy ianao, isika rehetra miombon'andraikitra hisitrahan'ny vehivavy ny zony". Niainga teto Antananarivo nanomboka tamin’ny 1 martsa lasa teo, noho izany, ny Rodobe ho an'ny Fahasalamana sy ny Zon'ny vehivavy, ahitana fiarabe manome tolotra ara-pahasalamana ho vahoaka. Mizotra mianatsimo mamakivaky an’iny lalam-pirenena faha-7 iny. Marobe, hatramin’ny omaly, ireo toerana efa nijanonan’ilay fiarabe, toa an’i Vinaninkarena ao Vakinankaratra, Ivato Centre ao Amoron’i Mania… Afaka misitraka karazana tolotra ara-pahasalamana maro ny vehivavy, amin’ny toerana andalovan’ity « caravane » ity, toy ny fitiliana tazomoka, VIH/SIDA sy ireo aretina hafa azo avy amin’ny firaisana, homamiadan’ny vozon-tranonjaza… Eo ihany koa ny vaksiny sy ny fanomezana fandrindram-piterahana. Ankoatra ireo dia misy ny fanentanana ataon’ireo mpiara-miombon’antoka rehetra, toy ny UNFPA, ny Marie Stopes, ny fikambanana Tanora Iray sy ireo minisitera voakasika, momba ny herisetra mifototra amin’ny miralenta sy ny lalàna mifandraika amin’izany. Vehivavy miisa 10.000 no heverina fa hahazo tombony amin’izao hetsika izao, hatramin’ny 8 martsa, fotoana hanatanterahana ny fankalazana ôfisialy ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy, izay hotontosaina any Toliara.